Maxbuus Si La Yaab Leh Ugaga Baxsaday Xabsi Ku Yaal Duleedka Magaalada Paris – somalilandtoday.com
Maxbuus Si La Yaab Leh Ugaga Baxsaday Xabsi Ku Yaal Duleedka Magaalada Paris
(SLT-Paris)-Redoine Faid oo ah nin dambiyo badan galay oo caan ka ahaa dalka Faransiiska ayaa ka baxsday xabsi ku yaal duleedka magaalada Paris ee dalka Faransiiska isagoo ku baxsaday diyaarad helicopter ah.
Warbaahinta dalka Faransiiska ayaa shaacisay in Faid oo ah nin French-Algerian oo burcad sare loogaga aqoonsan yahay dalka Faransiiska uu markii labaad uu ka baxsaday xabsi uu ku xirnaa.
Faid oo ah 46 jir ayaa la sheegay inay caawiyeen ugu yaraan saddex axsaabtiisa ka mid ah oo hubeysnaa kuwaasoo helikabtor ugaga soo qaaday barxada xabsiga Reau ee ku yaal duleedka koofurbari magaalada Paris,sida ay daabacday Le Parisien.
Wargeyska Le Monde ayaa daabacay in howlgalka loogaga duuliyay xabsiga Faid inuu qaatay muddo saddex daqiiqo oo kaliya.
Waxaana laga helay duleedka Waqooyi ee magaalada Paris diyaaradii helikabtarta ahayd ee lagu fakiyay burcadkan iyadoo la gubay.
Faid ayaa mar ahaa dambiilaha ugu weyn ee laga doondoonayay dalka Faransiiska waxaana uu ka baxsaday xabsiga April 2013 isagoo afduubtay afar ilaalada xabsiga ah waxaana uu isticmaalay waxyaalaha qarxa oo lagu soo qariyay dhar isagoo dhowr albaab qarxiyay.
Hase yeeshee waxaa laga soo qabtay hotel ku yaal duleedka magaalada Paris lix toddobaad kadib. Faid ayaa waxaa uu hadda ku xukunaa 25 sano oo xabsi ah kadib markii lagu soo qabtay fal burcadnimo oo dhicisoobay sanadkii 2010.